Tsy misy kilalaon-jaza - izany no fomba ahitanao ny zana-pokontany marina
Fantaro ny fomba fandoavana ny toerana
Ampiasao ny fahafahanao hianatra sy hitoky amin'ny fihetseham-ponao
Montessori, kilasy kambana amin'ny fiteny roa na be mpanaraka? Ny fifidianana ny zana-kavoana marina dia tsy mora ho an'ny ray aman-dreny maro. Izany dia amin'ny ampahany noho ny hoe sarotra ny mahita ny tsara ho an'ny zanakao noho ny hevi-pitenenan'ny fampianarana. Etsy andaniny, misy ny zo hisafidy malalaka ny karajia any Alemana, saingy tsy midika izany fa malalaka ny toerana iray ao amin'ny lalana tiana.
Tsy kilalaon-jaza - izany no fomba ahitanao ny zana-pokontany marina
Ankoatra izany, amin'ny maha-reny na ray anao dia tokony ho fantatrao ireo fepetra ahafantaranao ny kalitaon'ny toerana fitsaboana iray andro.
Hanombohana aloha amin'ny fikarohana ny zana-kavoana
Ny safidin'ny kindergarten marina
Raha toa ka ny zanakao no manatrika fivoriam-pokontany hatramin'ny telo taona, dia matetika no misy ny fanoratana amin'ny Janoary sy Martsa. Hatramin'ny Aprily, ny fanekena na ny fanafoanana dia alefa. Ho an'ireo andrim-panjakana tsy miankina amin'ny fiangonana na tsia, dia mety ho hafa noho ireo ao amin'ny gardynin'ny tanàna ny fe-potoana.
Ve ianao, aoka ny zanakao eo anoloan'ny fikarakarana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana fahatelo amin'ny foibe fikarakarana ny andro, satria te-hiditra ny asa araka izay haingana araka izay azo atao, dia tokony hanomboka ny fikarohana, fa, fara fahakeliny, 12 ho 15 volana alohan'ny manomboka ny asa tany am-boalohany.
Na izany aza, alohan'ny handehananao am-pahibemaso any amin'ny akanin-jaza iray dia tokony handinika izay tena zava-dehibe aminao amin'ny fikarakarana ny zanakao. Ilaina ny mandinika ny toetran'ny zanakao. Ireo ankizy malaza sy voatokana, izay tsy dia nanana traikefa kely tamin'ny fikarakarana tany ivelany, dia eo am-pelatanana any amin'ireo andrim-panjakana madinika misy fiaraha-miasa maharitra.
Ny toetran'ny zanakao dia mety ho manan-danja amin'ny fisafidianana ny karajia tsara
Raha maneho fikarohana be dia be ny zanakao, ohatra, dia misy fanontaniana manan-daza ao amin'ny akanin-jaza iray manana hevitra misokatra. Ankoatra izany, amin'ny maha ray aman-dreny azy, dia tokony handinika ny lanjany ara-pampianarana ho zava-dehibe aminao ianao. Ny ankizy madinika rehetra dia miasa araka ny foto-kevitra manokana. Matetika dia azo jerena ao amin'ny vohikalan'ny orinasam-panjakana na ny ray aman-dreny liana ny hevitra.
Maro ny fikarakarana fikarakarana ny fikarakarana ara-batana na amin'ny fanabeazana mozika. Ankoatr'izany dia misy zana-tovovavy roa na ireo manana fomba fampianarana ara-pampianarana toy ny fianarana an'i Montessori na Waldorf. Ny fampianarana ara-pinoana sy ny fanelanelanana momba ny fitsipika kristianina sy ny soatoavina dia tena manan-danja tokoa amin'ireo andrim-piangonana.
Tsy ny firenena rehetra ihany, fa ny tanàna rehetra dia afaka manapa-kevitra ny amin'ny fomba hanomezana toerana ny toerana ho an'ny kamboty. Ho an'ireo andrim-panjakana ao amin'ny kaominina, dia afaka manondro ny kardinaly tianao indrindra ianao amin'ny endrika fanoratana. Matetika ny ray aman-dreny no omena alalana. Na izany aza, miankina amin'ny haben'ny vahoaka izany, manoloana ireo manampahefana ara-panjakana hanolotra anao toerana any amin'ny karaoty hafa akaikin'ny toerana misy anao. Tsy misy zo ara-dalàna mankany amin'ny toerana fitsaboana any amin'ny toeram-pitsaboana manokana. Ny zavatra rehetra tokony hatao dia ny fiantohana fa ny ankizy rehetra dia raisina an-tsakany rehefa mametraka ireo toerana.
Na dia ny hevitra tsara indrindra momba ny fampianarana aza dia tsy manan-danja raha toa ka tsy mahavita mampihatra izany amin'ny fomba andavanandro ny olona mahay.
Manararaotra ny fotoana rehetra hijerena manokana ireo tranokala. Manao fanamarihana mialoha ireo lafin-javatra izay tena tianao sy iretsy an-toerana. Amin'io fampahalalana io dia azonao atao ny mampitaha tsara kokoa ny toeram-pitsaboana tsirairay avy any aoriana ary handray fanapahan-kevitra tsara ho an'ny zanakao.
Noho izany, tandremo ny fitondrana ny zanakao rehefa mijery manodidina ny toeram-pivarotana manokana ianao: Ho tonga saina ianao raha hahatsiaro tsara ny zanakao vavy na ny zanany ao amin'ny kilasy orinasa na tsia. Ny lafiny farany dia tokony hanana ny laharam-pahamehana indrindra amin'ny fisafidianana ny kindergarten.
Ny zaza kamboty tsara dia azo ekena noho ny fisian'ny atmosfera mafana ary ny zanaka sy ny ray aman-dreny dia raisina amin'ny fankasitrahana. Tokony hifanaraka tsara ny fifandraisana eo amin'ny mpiasan'ny sekoly. Ny asa fanabeazana tsara ao amin'ny akanin-jaza dia miankina foana amin'ny fiheverana ny fiaraha-miasa ao amin'ny ekipa.
Izany hoe, zava-dehibe ny mangarahara. Fikambanana iray izay hikarakara ny zanakao hiaraka aminao eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Midika izany fa, amin'ny maha-ray aman-dreny anao, dia miara-miasa amin'ny akanin-jaza ianao mba hiaraka aminao sy hanohanana ny fivoaran'ny zanakao. Anontanio amin'izay ny fomba azo atao, ny fomba ahafahan'ny ray aman-dreny mandray anjara amin'ny fiainana andavanandro ao amin'ny akanin-jaza ary mifantoka amin'ny fitsidihanao momba ny fampatsiahivana sy ny fampahalalam-baovao.
Farany fa tsy ny kely indrindra, ny fitaovana amin'ny akanin-jaza dia tsy zava-dehibe. Tsy voatery ho toeram-pivarotana farany foana izany, fa toy ny kilalao fanabeazana mahasoa ihany koa ny trano anatiny sy mahazaka. Ankoatra ny fanorenana. Ny famoronana sy ny fananganana fitaovana dia tokony ho azo amidy ny lalao amin'ny birao, toy ny tahirin-tsarimihetsika, sary boky sy fitaovana lalao ho an'ny lalao mitaingina.
Satria ny telo taona dia samy manana ny filany samihafa noho ny ankizy mianatra any an-tsekoly, tsy tokony hisy ny kilalaon-java-tsarobidy sy ny saran-dàlana mianatra, izay tokony aseho anao. Azonao atao koa ny mamantatra ny asan'ny toeram-piofanana any amin'ny toerana tsirairay. Ny fampiroboroboana ny famatsiam-bola amin'ny sehatry ny fifantohana, ny teny sy ny fanoratana, ny fandaminana ny tena ary ny sehatra fampandrosoana mendrika dia manan-danja.
Ao amin'ny ankizy madinika iray, ny fanontaniana rehetra tokony hovaliana dia tokony hamaly amim-paharetana sy amin'ny antsipiriany. Raha tsy izany no mitranga, tokony hanohy hikatsaka ianao: Ny fiantohana tsara dia afaka miasa raha toa ka mandray anjara amin'ny tombontsoan'ny zaza ny antoko rehetra ary ianao dia afaka mametraka fitokisana amin'ny orinasa toy ny karajoro.
Ahoana no ahitako ny fiarovan-tena marina? Woman fashion
Fahadisoana ho an'ny ankizy - misy fahasamihafana
Fisotroana gilasy - Rehefa mameno ny zava-manitra tsara
Mpampianatra teny roa samihafa
Veloma finaritra amin'ny mpampianatra ao amin'ny kindergarten
Fialantsasatr'ireo fianakaviana ao amin'ny fianakaviana amin'ny fety